Ugu yaraan 30 qof oo ku geeriyooday qaraxyo mataano ah oo ka dhacay caasimada Afkaanistaan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 30 qof oo ku geeriyooday qaraxyo mataano ah oo ka dhacay caasimada Afkaanistaan
January 10, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 30 qof oo ku geeriyooday qaraxyo mataano ah oo ka dhacay caasimada Afkaanistaan. [Sawirka: Reuters]
Kabul-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay 80 kalena waa ay ku dhawacmeen qaraxyo mataano ah oo ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka dalka Afkaanistaan ee gudaha caasimada Kabul, sida ay sheegeen saraakiishu.
Weerarka ayaa dhacay intii lagu guda jiray saacadii rawaxaada, iyada oo shaqaalaha ay ka tagayeen xarunta baarlamaanka.
Daqiiqado kadib markii qaraxa uu dhacay, qof u hadlay ururka Taalibaan ayaa sheegay in ay iyagu geysteen weerarka oo uu sheegay in ay la eegteen haayada sirdoonka Afkaanistaan.
Intooda badan dadka dhintay ayaa la sheegay in ay ahaayeen shacab, oo ay kamidyihiin shaqaalaha baarlamaanka.
Ilaaliye katirsanaa baarlamaanka oo dhaawacmay oo magaciisa lagu sheegay Zabi ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in qaraxa uu ka dhacay banaanka xarunta baarlamaanka, waxaana uu sheegay in qaraxa kowaad uu sababay qof lugeynayay oo isa-soo miidaamiyay.
Ahmed Wali, oo ah taliyaha ciidamada booliiska degmada todobaad ee Kabul, ayaa BBC uu sheegay in qaraxa labaad oo ahaa gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa uu dhacay kadib markii ciidamada booliiska ay damceen in ay caawiyaan dadkii dhibaatadu kasoo gaartay qaraxii hore.